Fanamasinana pretra sy diakra fikambanana Karma - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Rojo Randrianarimalala il y a 4 années
Hotanterahina ny alahady 19 Jolay izao indray ny fanamasinana pretra ho an’ireo fikambanan’ny Karma. Diakra efatra hohamasinina pretra ary frera iray ho diakra. Noezahina hatrany ny fotoana hanatanterahina izany mba hifanandrify amin’ny fanaovana diabe am-bavaka tontosaina isan-taona. Izany hoe fandehanana an-tongotra miala eto Antananarivo mihazo ny lalam-pirenena faharoa hatrany Moramanga. Ny alatsinainy 13 jolay tamin’ny enina ora sy sasany maraina ireo mpanao diabe no niainga tao amin’ny foiben’ny Karma tao Ampasanimalo. Mpizaika sivy sy telonjato no nandray anjara tamin’izany. Mivavaka, manao raozery ary mandinika lohahevitra iray isan’andro no ataon’izy ireo eny an-dalana. Misy fijanonana efatra mazava tsara hatrany Moramanga amin’ny fiatoana : Carion, Manjakandriana, Anjiro ary miezaka ho tonga ao Moramanga ny alakamisy 16 jolay antoandro. Ny hananan’ny tsirairay faharetana sy fihafiana, ny fivahinianana masina ary ny fanajana an’i Masina Maria no tanjona amin’izany. Ny alahady kosa dia misy ny lamesa lehibe hamaranana ny fotoana sy hanamasinana ireo pretra karma vaovao.
Ireo dingana lalovana maha pretra Karma
Toy ireo fikambanan’ny pretra rehetra dia maro ireo dingana arahina ho an’ireo maniry ho pretra Karma. Fepetra takian’izy ireo voalohany ny fananana diplaoma bakalorea. Misy ihany ny mbola tsy manana izany fa afaka efa mijery sahady sy mandinika ny lalana hodiavina na ireo « aspirant », any Arivonimamo no misy azy ireo. Dingana voalohany ny fanaovana andran’asa eny anivon’ireo fikambanana karma. Mandritra izany dia mijery, mandinika ary mianatra ny fomba fiainan’ireo eo anivon’ny fikambanana izy ireo ao anatin’ny herintaona. Rehefa izay dia miditra ho « pré-postulant », amin’izay dia efa manomboka mazava ny lalana ary miditra lalina kokoa amin’ny firaha-miasa amin’ireo efa pretra. Avy eo dia « postulant », tsy dia mifanalavitra amin’ny dingana teo aloha fa efa somary mafy kokoa ny eo amin’ny fanabeazana, any Moramanga no misy an’ireo. Vita izay dia miakatra ho « noviciat » izany hoe andram-piainana amin’ny maha pretra mihitsy. Miezaka miaina sy mahafantatra ny rafitra eo amin’ny fikambanana, ireo olomasina ary ny fiainan-drelijiozy. Rehefa tanteraka izany ka mahafeno ny fepetra rehetra dia afaka manao ny voady voalohany. Avy eo dia mianatra filozofia telo taona ary manao « régence » alohan’ny hidirana hianatra teolojia telo taona koa. Amin’ny taona faharoan’ny teolojia no hamasinina ho diakra ary rehefa mamarana azy no hamasinina ho pretra. Ao anatin’ireo fotoana rehetra ireo anefa dia tsindriana hatrany ny fandalinana ny finoana. Antitranterina izany mandritra ny fiofanana rehetra. Lava ny fianarana ny maha pretra satria ny pretra dia hitondra olona, ho tompon’andraikitra eo anivon’ny firaha-monina, ho vavolombelona ary hanatanteraka ny asan’Andriamanitra mandrakizay. Fotoana ihany koa handinihina tena sy handinihin’ny fikambanana ireo hikasa ho pretra.
Ny vavaka latsa-paka no mampiavaka ireo ao amin’ny fikambanan’ny karma. Izany hoe tena mivavaka foana no handanian’izy ireo ny androtokom-piainany. Avy eo ny fahaizana miara-miasa aman’olona satria tsy maintsy miara-miasa amin’ny fikambanana ny pretra rehetra. Ary farany ny mampivavaka olona. Mitantana ny ara-panahin’ny olona tsirairay, mizara ny sakramentan’ny fampihavanana ary mampanao laretirety.
- Frera hohamasinina diakra :
Andriamandresenarison Jean Roc Polycarpe, Diosezin’Antananarivo.
- Diakra hohamasinina pretra :
Ratovoson Honoré, Diosezin’i Miarinarivo
Andriamionintsoa Jacky Jean Claudet, diosezin’Antsirabe (ampovoany eo amin’ny sary)
Rasolonjatovo Henri, diosezin’Antananarivo (eo amin’ny ankavia amin’ny sary)
Rakotonirina Solofoniaina Chrysante, Diosezin’i Mahajanga (ankavanana eo amin’ny sary).